बैतडीमा अचम्मको गुफा : ढुंगा फुटाउन खोज्नेको मुटु दुख्ने ! « Pariwartan Khabar
बैतडीमा अचम्मको गुफा : ढुंगा फुटाउन खोज्नेको मुटु दुख्ने !
7 February, 2018 3:15 pm
बैतडीमा अद्भुत गुफा भेटिएको छ । बैतडीको सिगास गाउँपालिका –१, गाँजरी नजिक गिवाडी खोलामा घर बनाउन ढुंगा निकाल्दा गुफा भेटिएको हो ।स्थानीय बासिन्दा उज्वलराम विश्वकर्माले घर बनाउन ढुंगा निकाल्दा गुफा भेटिएको हो ।
अहिले गुफा हेर्नेको घुइँचो लागेको छ । गुफाभित्र पौराणिक मुर्तिहरु फेला परेका छन् । गुफाभित्र गणेशको, हात्ती र शंखको मुर्ति भेटिएको गाँजरी प्रहरी चौकीका इन्चार्ज जनकसिंह धामीले बताउनुभयो ।
विश्वकर्माले मंसिर ८ गते घरका लागि ढुंगा फुटाउन खोज्दा घन उछिट्टिएर खुट्टामा बजारिए पनि केही चोट नलागेको बताउनुभयो । पछि त्यो ढुंगा छोडेर तलतिरबाट ढुंगा निकाल्न खोज्दा जतिपटक सब्बल हान्यो त्यती पटक जोरले मुटु दुखेको उज्वलको भनाई छ । मुश्किलले एउटा ढुंगा निस्केपछि त्यो ठाउँमा गुफा र मुर्ति भेटिएपछि ढुंगा निकाल्न छोडेको उज्वलले बताउनु
गुफा रहेको क्षेत्रमा राती बत्ती बल्ने गरेको बुढापाकाहरुको भनाइ छ । सिगासधामको नामबाट नामाकरण गरिएको सिगास गाउँपालिकामा फेला परेको गुफाका बारेमा स्थानीयवासी चकित परेका छन् । सिगास गाउँपालिका धार्मीक क्षेत्रमा पर्ने भएकोले गुफा र मुर्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने पत्रकार महासंघ बैतडीका अध्यक्ष प्रेम भाटले बताउनुभयो ।